विश्वकप छनोट खेल्न नेपाली टिमको घोषणा, को-कोले पाए स्थान ? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप छनोट खेल्न नेपाली टिमको घोषणा, को-कोले पाए स्थान ?
काठमाडौं, असोज ३ । यही असोज १७ देखि २६ गतेसम्म मलेसियामा हुने आइसिसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा आज १८ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस मलेसियालाई छैठौं झड्का, पारसले लिए विकेट (LIVE)
याे पनि पढ्नुस युएईको सातौं विकेट पारसले लिए, खेल रोमाञ्चक बन्यो !
मलेशियामा हुने छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’मा छ । नेपालको समूहमा चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भूटान, सिङ्गापुर र मलेशिया रहेका छन् ।नेपालले पहिलो खेल असोज १७ गते म्यानमारसँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल २० गते मलेशियासँग, २१ गते थाइल्याण्डसँग, २४ गते चीनसँग र २६ गते सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ । -रासस
याे पनि पढ्नुस पारस खड्काले ५० रन पूरा गरेपछि‍‍‍...
ट्याग्स: Cricket Team, Paras khadka, T-20 world cup